फाँसीमा लड्किनुअघि इरानी युवतीको चिठी – SUDARSHAN NEPAL
Posted on December 20, 2017 by sudarshan nepal
बलात्कार गर्न खोज्ने एक इरानी गुप्तचर अधिकारीलाई सन् २००९ मा छुरी प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा अदालतले इरानी इन्टरियर डिजाइनर २६ वर्षीया रेहाने जब्बारीलाई फाँसीको सजाँय सुनायो । उनलार्इ शनिबार मृत्युदण्ड दिइएको छ. फाँसीको तख्तामा जानुअघि रेहानेले आमा सोलेह पक्राभनलाई लेखेको यो चिठी अहिले विश्वमा चर्चित बनेको छ:
मैले कठोर दण्ड पाउने कुरा मैले आजै थाहा पाएँ । म आफ्नो जीवनरूपी किताबको अन्तिम पानामा आइपुगेकी छु भन्ने कुरा तपार्इं स्वयंले मलाई नबताउँदा मेरो मन किञ्चित कुँडिएको छ । यो कुरा मैले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने तपाईंले किन सोच्नुभएन ? यो सब कुराले तपाईंलाई भित्रैदेखि मर्माहत बनाएको छ भन्ने मलाई थाहा छ र यसले मलाई लज्जित तुल्याएको छ । तपाईंको र बुबाको हात एकपटक चुम्ने मौकाबाट मलाई किन वञ्चित राख्नुभयो आमा ?
तर, तपाईंले हासिल गर्नुभएको अनुभवसिद्ध ज्ञान सत्य रहेनछ । जब ममाथि यो घटना घट्यो, तपाईंले मलाई दिनुभएको जीवनका मूल्यसम्बन्धी ज्ञान सबै बेकार साबित भए । तपाईंले भनेबमोजिम गर्दा मलाई नृशंस हत्यारा र निर्मम अपराधीका रूपमा अदालतमा उपस्थित गराइयो । त्यतिवेला मेरो आँसु खसेन । मैले कसैसँग जीवनरक्षाका निम्ति हात फिजाइनँ । मलाई कानुनप्रति विश्वास थियो । त्यसैले विरोधमा म केही बोलिनँ ।
म कस्तो कमलो मन भएकी छोरी हुँ भन्ने तपाईंलाई राम्रोसँग थाहा छ । मैले कहिल्यै एउटा लामखुट्टे पनि मारिनँ । घरमा कुनै साङ्लो फेला पर्‍यो भने त्यसको जुँगामा समातेर म बाहिरतिर मिल्काइदिने गर्थेँ, मार्दिनथेँ । तर, आज मलाई नियोजित हत्यारा बनाइयो । जनावरप्रतिको मेरो व्यवहारलाई छोरोमान्छे जस्तो बन्न खोज्ने मेरो अभिलाषाका रूपमा अथ्र्याइयो । तर, यो घटना घट्दाखेरि मेरो हातका लामा, पालिस लगाएर चिटिक्क पारेका नङप्रति न्यायाधीश महोदयको ध्यानै गएन ।
तर, खुदाको अदालतमा फेरि मुद्दा चल्नेछ आमा । त्यहाँ म निरीक्षकविरुद्ध मुद्दा हाल्नेछु, न्यायाधीश महोदयविरुद्ध मुद्दा हाल्नेछु, यो देशका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सबैविरुद्ध मुद्दा हाल्नेछु ।
Previous Article Teen Depression and Anxiety: Why the Kids Are Not Alright – Times.com
Next Article एकादेशको कथा